Ndị na-echekwa ihe na-echebe ihe, Respirator Face Mask Manufacturers & Suppliers | Blue Star
Thelọ ọrụ a bụ ụlọ ọrụ si mba ọzọ kwụrụ ụgwọ na -emepụta mkpuchi nkpuchi.
Nkpuchi na Respirator
Ihe Nkpuchi Anya Obodo & Onye nkwanye ume
Ihe eji eme ogwu
Gịnị kpatara anyị
Ezi ihe eji emeputa ihe puru iche
The Blue Star ika ure-àmà, deodorant na mgbochi microtoxic ogbo echebe masks na owu usoro echebe masks mepụtara site na ụlọ ọrụ na-arụpụtara na pụrụ iche ihe, arọ nchedo, mara mma na inogide.
The Blue Star ika ure-àmà, deodorant na mgbochi microtoxic sponge echebe masks na owu echebe masks mepụtara site na ụlọ ọrụ na-arụpụtara na pụrụ iche ihe, arọ nchedo, mara mma na inogide; ihe nkpuchi iku ume, ihe nkpuchi a na-achoghi na ya, uzo nkpuchi ato, ihe nkpuchi Butterfly, KN95, ihe nkpuchi ihe ndi ozo, ihe nkpuchi egwuregwu, ihe nkpuchi ihe nkpuchi oyi, ihe nkpuchi ndi ozo na ndi ozo; n'etiti ha, a na-emechi ihe nkpuchi akụkụ atọ nke ụmụaka na agba dị iche iche.
3 Ply nkpuchi ọgwụ
Ihe eji eme ihe bu ihe eji acha anụnụ anụnụ. Nhọrọ a dabere na ojiji, dịka ọmụmaatụ, n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí. Ihu igwe na-ekerekwa oke ọrụ dị ka ebe nwere iru mmiri na mmiri dị elu. QC siri ike na sistemụ nchịkwa anyị nwere ike ịgba mbọ hụ na. Ojiji nke ngwaahịa a na-enyere ndị mmadụ aka ibelata oge ọrụ ha ma na-enyere ha aka belata ọrụ na-agwụ ike na ọrụ dị ukwuu.
Ihe nkpuchi na-ekpuchi ahụike
Nkpuchi nchebe ọgwụ
Ihe nkpuchi nwere uzo ato na-enweghi nkuchi imi
Nkpuchi akụkụ atọ na-enweghị mkpịsị imi
KN95 nkpuchi. Ngwaahịa a na-adọta uche na arụmọrụ ya na-ekpo ọkụ ọkụ dị mma. Site na sistemụ ndozi ohuru arụpụtara, enwere ikuku ikuku zuru oke maka ọrụ ogologo oge. Usoro pụrụ iche nke eji esiji ngwaahịa a rụpụtara na -emepụta akwa akwa nwere akwa dị warara ma nwee ezigbo ederede na-adịgide adịgide ma dị nro karịa akwa akwa. Nhọrọ nke ihe eji eme ihe maka Blue Star bu ihe nlere anya. Ọ na-eburu n'uche akụrụngwa anụ ahụ (njupụta, isi agbaze, Ngwongwo igwe / ihe ọkụ, wdg) na akụrụngwa akụrụngwa (isi ike, ịgbatị, plasticity, wdg).
N'IHI gịnị US
The ụlọ ọrụ nwere ISO9001 quality management usoro asambodo, pụrụ iche ọrụ nchedo ngwá mmepụta ikike, pụrụ iche ọrụ nchebe ngwá ọrụ nchekwa akara akwụkwọ. Akwụkwọ ikike mmepụta ngwaọrụ, akwụkwọ ndebanye aha ngwaọrụ ahụike. Edere FDA, CE, nke edepụtara na ndepụta ọcha nke Ministry of Commerce, Asambodo ndị mba ọzọ na Medicallọ Ọrụ Mbubata na Mbupụ Na-ahụ Maka Ọrịa.
Ruo ihe karịrị afọ 50, ọ bụ onye malitere ụlọ ọrụ nkpuchi na Fujian. Onye nchoputa echefubeghi ebumnuche mbụ ya, cheta ozi ya, duru ndị Blue Star ka ha gaa n’ihu, ma gbalịsie ike ichebe ndụ ndị ọrụ na-aga n’ihu. Na 2020, ọnọdụ ntiwapụ ahụ dara na mberede. Ndị Blue Star echefughị ​​ọnọdụ ntiwapụ ahụ na ndị nwere obi ọjọọ nwere ịhụnanya. Na nzaghachi nye iwu gọọmentị ịmaliteghachi ọrụ na ụbọchị mbụ nke afọ, ha ghọrọ ụlọ ọrụ ịzụta na nchekwa dị mkpa nke Council Council.
Iwu si Malaysia
Nye iwu site na Malaysia: urukurubụba dị ezigbo mkpa, nke nwere imi imi, akwa meltblown ahaziri, tinyere ihe ndị na-enye ya, nwere ọrụ pụrụ iche. A na-etinye ya n'otu n'otu na akpa akwụkwọ plastic-plastic, nke bụ ikuku dị elu.
Emergencylọ ọrụ mberede Czech nwere ihe nkpuchi Nafu
Igwe ihe mberede na Czech nwere igwe mkpuchi Nafu
Xiamen Blue Star Enterprise Co., Ltd. nke e guzobere na 1987.
Elydabere na China ọgwụ University, Fujian Medical University na Qilu Medical College nke Shandong University, na enterprise jikotara aka guzobere a ndụ sayensị na nkà na ụzụ nnyocha center na Xiang'an District na-ebu ulo oru upgrading na mụbaa enterprise ngwaahịa ngwaahịa si echebe masks, first- klas na nke abụọ ụlọ ọrụ ahụike na nke atọ na ahụike ọgwụ na ihe mgbochi ọrịa dị ka akụrụngwa na ihe oriri, na -emepụta usoro nrụpụta maka ndị na-eri ngwa ọrụ ahụike.
Ọ B IFR YOU na INWORE ỌZỌ AJIONJ, Dee anyị
Copyright © 2021 Xiamen Blue Star Enterprise Co., Ltd. - www.bluestarmask.com All Rights Reserved.